Fanaiky : I Ony no hanolotra ny voany -
AccueilSosialyFanaiky : I Ony no hanolotra ny voany
Fanaiky : I Ony no hanolotra ny voany
05/11/2018 admintriatra Sosialy 0
Efa niatrika fitsaboana teny amin’ny hopitaly tao anatin’ny roa volana. Tsy maintsy hiatrika fandidiana i Fanaiky, ilay mpanakanto fantatra eo amin’ny fitendrena gitara beso noho ny homamiadan’ny voa mahazo azy. « Efa miha-tsara izy nefa mbola mitohy ary miha-sarotra ny fitsaboana », araka ny fanazavany nentin’i Mendrika , rahalahiny sady mpikambana ao amin’ny tarika Solomiral. Mikasika ny fandidiana dia efa fantatra fa i Ony, izay rahalahiny no hanolotra ny voa iray ho an’i Mendrika. Tsy maintsy any ivelany anefa ny fanatanterahana ny fandidina ary mitentina 35.000 dolara na manodidina ny 140 tapitrisa Ariary ny saran’ny fitsaboana. Ankoatra ny homamiadan’ny voa mahazo azy sy ny diabeta efa nitaiza azn’i Fanaiky, dia tsy maintsy ho didina ihany koa ny masony iray izay tratran’ny « Catarcte », mila fitsaboana ihany koa ny fo izay misy tsetsina.
Tamin’ireo tolo-tanàna sy hetsika samihafa ho fanohanana ity mpanakanto ity dia mitentina 30 tapitrisa Ariary ny vola voaangon’ny fianakaviana. « Amin’izao fotoana anefa dia tsy maintsy miatrika dialyse in-telo isan-kerinandro izy ary mahatratra 800.000 Ar ny sandan’ny iray, ary tsy maintsy hiatrehana izany ny vola eo am-pelatantanana », hoy hatrany ny fanazavan’ny fianakaviana. Araka izany dia mbola manao antso avo amin’ny tolo-tanana ho an’ny fitsaboana ny fianakaviana. « Misaotra ireo rehetra efa nitondra ny anjara birikiny tamin’ireo hetsika samihafa ho tolo-tanana ho an’i Fanaiky, ary mbola manao antso avo amin’ny hanohizana izany amin’ny fiatrehana ny fandidiana atao any ivelany », hoy hatrany ny antso nataon’i Mendrika.
Nanomboka ny volana aogositra dia efa maro ireo hetsika nataon’ny mpanakanto Malagasy, na teto an-toerana na tany ivelany ho fanampiana ity mpanakanto ity.
Araka ny fanazavan’ny talen’ny sekoly ambony Polytechnique eny Vontovorona, ny Profesora Yvon Andriamaharison, dia hiara-hiasa amin’ireo minisitera maromaro eto Madagasikara izy ireo. Namaly ny antson’ny sekoly Polytechinque Vontovorona voalohany kosa ny teo anivon’ny minisiteran’ny Rano ...Tohiny